Ny seranam-piaramanidina Frankfurt dia mbola misy fiatraikany amin'ny fihenan'ny mpandeha marobe
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny seranam-piaramanidina Frankfurt dia mbola misy fiatraikany amin'ny fihenan'ny mpandeha marobe
Vondrona Fraport: ny fidiram-bola sy ny tombom-barotra dia latsaka mafy tao anatin'ny valanaretina COVID-19 tao anatin'ny sivy volana voalohany tamin'ny 2020
Ny seranam-piaramanidina Frankfurt dia nahatratra ny fitomboan'ny entana matanjaka - Ny fihenan'ny fifamoivoizana dia voalaza fa tamin'ny ankamaroan'ny seranam-piaramanidina Group manerantany. Tarehimarika momba ny fifamoivoizana Fraport - Febroary 2021:
Tamin'ny volana febroary 2021, ny seranam-piaramanidina Frankfurt (FRA) dia nanompo mpandeha 681,845 - fihenan'ny 84.4 isan-jato raha oharina tamin'io volana io tamin'ny taon-dasa. Ny fifamoivoizan'ny mpandeha nahangona FRA nandritra ny roa volana voalohany tamin'ny taona dia nidina 82.6 isan-jato isan-taona. Ity fangatahana ambany ity dia mbola nateraky ny famerana ny fivezivezena mandritra ny areti-mandringana Covid-19.
Mifanohitra amin'izany kosa, ny fampidinana entana (airfreight + airmail) dia nitombo 21.7 isan-jato hatramin'ny 180,725 metric taonina tao anatin'ny volana mitatitra - na eo aza ny tsy fahampian'ny fahaiza-manaon'ny kibo omen'ny fiaramanidina mpandeha. Noho io fitomboana matanjaka io, ny seranam-piaramanidina Frankfurt dia nanoratra ny volana ambony indrindra amin'ny volana febroary teo. Ny hetsiky ny fiaramanidina dia nihena 69.0 isanjaton'ny 11,122 fiaingam-pandeha sy ny fipetrahana, raha toa ka 56.7 isan-jato ny lanjan'ny lanja farany ambony (MTOW) niangona 961,684 isan-jato ka hatramin'ny XNUMX taonina taonina isan-taona.
Ireo seranam-piaramanidina ao amin'ny portfolio iraisam-pirenena Fraport dia nanohy nitatitra valiny marobe tamin'ny febroary 2021, miaraka amin'ny fahombiazan'ny fifamoivoizana miankina amin'ny toe-javatra areti-mifindra any amin'ny faritra tsirairay avy. Ny seranam-piaramanidina rehetra an'ny Fraport's Group manerantany - afa-tsy ny Xi'an any Shina - dia nahitana fihenan'ny fifamoivoizana raha oharina tamin'ny febroary 2020.
Tany Slovenia, ny seranam-piaramanidin'i Ljubljana (LJU) dia nahitana latsaka ambany hatrany amin'ny 93.1 isan-taona isan-taona ny mpandeha 5,534 2021 nandritra ny volana feb 553,336. Ny seranam-piaramanidina Breziliana roa an'ny Fortaleza (FOR) sy Porto Alegre (POA) dia nampiditra mpandeha 54.6 83.9, nidina 320,850 isan-jato. Ny fifamoivoizana tao amin'ny seranam-piaramanidina Lima ao Lima (LIM) dia nidina XNUMX isan-jato ho an'ireo mpandeha XNUMX.
Ny isan'ny fifamoivoizana ho an'ny seranam-piaramanidina rezionaly grika 14 dia nihena 84.1 isan-jato ho 93,813 mpandeha tamin'ny volana feb 2021. Teo amoron'ny Ranomasina Mainty Bulgaria, ny seranam-piaramanidina Twin Star an'ny Burgas (BOJ) sy Varna (VAR) dia niara-nahazo mpandeha 16,914, nihena 77.6 isan-jato -ny taona. Nihena 64.8 isan-jato ny mpandeha tao amin'ny seranam-piaramanidina Antalya (AYT) any Torkia ka 292,690 ny mpandeha. Seranam-piaramanidina Pulkovo (LED) any St. Petersburg, Rosia, dia nandray mpandeha 716,739, nidina 38.9 isan-jato. Ny seranam-piaramanidina vondrona tokana nandrakitra ny fitomboan'ny fifamoivoizana dia ny seranam-piaramanidina Xi'an (XIY) any Sina. Nihena be ny fifamoivoizana tao amin'ny XIY tamin'ny volana nitaterana, nitombo 272.2 isan-jato ho an'ny mpandeha 1.7 tapitrisa raha oharina tamin'ny febroary 2020 - raha efa tratry ny areti-mandringana Covid-19 i Sina.
Gloria Guevara dia miady ho an'ny fitarihana amin'ny fanokafana ny fomba WTTC Travel
Flexi Fares no fironana amin'ny famandrihana fitsangatsanganana